ဂျပန်​လာ​ချင်​လို့​ပါ | J-Myanmar
ဂျပန်​လာ​ချင်​လို့​ပါ.. အလုပ်​နဲ့​လာ​ရင်​ကောင်း​မ​လား!! ကျောင်း​နဲ့​လာ​ရင်​ကောင်း​မ​လား!! ဂျပန်​မှာ​အလုပ်အကိုင်​အဆင်​ပြေ​လား!! ကျောင်း​လာ​တတ်​ရင်​ဘယ်လောက်​ကုန်​မ​လဲ!! အလုပ်​နဲ့​လာ​ရင် ဘယ်​အေး​ဂျင့်စ်​က စိတ်ချ​ရ​လဲ!!
phyo — Dec 4, 2014
အလုပ်​နဲ့​လာ​ရင် ဘယ်​အေး​ဂျင့်စ်​က စိတ်ချ​ရ​လဲ!!
တော်တော်​များ⁠များ​က မ​ကြာ​ခဏ​မေလ့်စေ့်​ဘောက်​က​နေ​မေး​လေ့​ရှိ​တဲ့​မေးခွန်း​ပါ။အလုပ်​နဲ့​လာ​မယ်​ဆို​တဲ့​သူ​တွေ​အတွက်​ရော​ကျောင်း​နဲ့​လာ​မယ်​ဆို​တဲ့​သူ​တွေ​အတွက်​ရော​အရင်​ဆုံး​မှာ​ချင်​တာ​က မ​လာ​ခင်​ခြောက်​လ​က​နေ​တစ်​နှစ်​ကြိုတင်​ပြင်ဆင်​သင်​တန်း​သေသေချာချာ​တတ်​ပြီး​မှ​လာ​ခဲ့​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။အခြေ​ခံ​ဂျပန်​ဘာသာ​စကား​ကို​တော့​တတ်​အောင်​သင်​ခဲ့​ပါ။အခြေ​ခံ​ဂျပန်​ဘာသာ​စကား​ဆို​တာ​အနည်း​ဆုံး​ခြောက်​လ က​နေ တစ်​နှစ် JLPT N5-N3ထိ တတ်​အောင်​သင်​ပြီး​မှ​လာ​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။အလုပ်အကိုင်​အဆင်​ပြေ​မှူ​ကတော့​သင် ဘယ်လောက်​ဂျပန်​စကား​တတ်​သလဲ​ဆို​တာ​ရယ်​လူ​မှူ​ဆက်ဆံ​ရေး ဘယ်လောက်​ကောင်း​သလဲ​ဆို​တာ​ရယ်​သည်းခံ​နိုင်​စွမ်း​နဲ့​ဇွဲ​ဘယ်လောက်​ရှိ​လဲဆို​တာပေါ်​မူ​တည်​မယ်​လို့ ထင်​မိ​ပါ​တယ်။
(၁) ပညာ​ရှင်​အနေ​နဲ့​လာ​မှာ​လား!!ကိုယ်​တတ်​ကျွမ်း​တဲ့​ပညာ​ရပ်​တစ်​ခု⁠ခု​ကို အသုံး​ချ​ပြီး​အမြဲ​တမ်း​ဝန်​ထမ်း​အနေ​နဲ့​ဆို​ရင်​တော့​ကောင်း​ပါ​တယ်​ပညာ​ရပ်​တစ်​ခု​ကို​ထူးချွန်​စွာ​တတ်မြောက်​နေ​ပြီး​ဂျပန်​စာ​လည်း​အတော်​အသင့်​ရထား​ရင်​တော့​မက်​လောက်​စရာ လခ​လည်း​ရ​နိုင်​သ​လို​ဒီ​က​နေ​အတွေ့​အကြုံ​တွေ​လည်း​လေ့​လာ​သင်​ယူ​နိုင်​လို​တ​ချိန်⁠ချိန်​မှာ​ကိုယ့်​အတွက်​အခွင့်အရေး​ကောင်း​တွေ​ရှိ​လာ​နိုင်​ပါ​တယ်။ရှာ​သ​မျှ​အကုန်​မ​သုံး​ပဲ စုဆောင်း​တတ်​မယ်​ဆို​ရင်​ပညာ​လည်း​ရ​ငွေ​လည်း​ရ​နိုင်​လို့​လာ​သင့်​တယ်​လို့​အကြံ​ပြု​ပါ​ရ​စေ။ဒါပေမဲ့ အရေး​အကြီး​ဆုံး​ကတော့Homesick ဖြစ်​တာ​ကို ခံ​နိုင်​ရည်​ရှိ​ဖို့​လို​အပ်​သ​လို​သူ့​ထက်​ငါ သာ​တဲ့​ပညာ​ရှင်​ဂျပန်​လူ​မျိူး​တွေ​လည်း​အများ​ကြီး​ရှိ​လို့​အလုပ်​ကရ​လာ​မဲ့stress တွေ​ကို ခံ​နိုင်​ရည်​ရှိ​ဖို့​လည်း​လို​အပ်​ပါ​တယ်။ကိုယ့်​ပတ်ဝန်းကျင်​မှာ​ကိုယ်​က​ဘယ်​လောက်တော်​နေ​ပါ​စေ​ကိုယ့်​ထက်တော်​တဲ့​သူ ကိုယ့်​ထက်​အများ​ကြီးတော်​တဲ့​တတ်​တဲ့​လူ​တွေ​နဲ့​တွေ့​ရ​ဖို့​များ​လို့​ပညာ​ဂုဏ်​မ​မောက်​ပဲ​ကြိုးစား​သူ​တွေ​အတွက်​တော့ အဆင်​ပြေ​နိုင်​ပါ​တယ်။
အလုပ်​လာ​လုပ်​လို့​ရ​မဲ့​လ​စာ​က အခြေ​ခံ​လ​စာ​ဖြစ်​တဲ့​အတွက် သာမန်​ကျောင်းသား​တွေ​ရှာ​နေ​တဲ့​လ​စာ​ရဲ့​တစ်ဝက်​လောက်​လည်း​ဖြစ်​နိုင်​ပါ​တယ်။ ကြား​ဖူး​တာ​က တချို့​ဆယ့်​နှစ်​သိန်း​လောက်​နဲ့​လာ​လုပ်​ချင်​မဲ့​သူ​တွေ​ရှိ​တယ်​လို့​ဂျာနယ်​တွေ​မှာ​ဖတ်​ရ​ပါ​တယ်။ပညာ​ရှင်​တွေ ကျောင်းသား​တွေ တစ်​လ​ကို သိန်း​နှစ်​ဆယ်ကျော်​ရ​နေ​ချိန်​မှာ ကိုယ်​ရ​တဲ့​လခ​ကို​မ​တင်းတိမ်​နိုင်​ပဲ စက်​ရုံ​က​ထွက်ပြေး​သွား​သူ​တွေ​ရှိ​သ​လို​စက်​ရုံ​က​သတ်​မှတ်ထား​တဲ့​အလုပ်​က ကိုယ်လုပ်​နိုင်​တဲ့​အတိုင်း​အတာ​ထက်ကျော်​လွန်​နေ​လို့​မ​လုပ်​နိုင်​လို့​ထွက်ပြေး​သူ​တွေ​လည်း​ရှိ​တတ်​ကြ​ပါ​တယ်။စက်​ရုံ​အလုပ်​ဆို​တာ​တော့ ပင်ပန်း​မှာ​ပါ​အချိန်​တန်​ရင် ဘယ်​နေ့​ဘယ်​အချိန်​ကို ပစ္စည်း​အရေအတွက် ဘယ်လောက်​ပြီး​ရ​မယ်​ဆို​တဲ့​သတ်​မှတ်ချက်​တွေ​ကြား​လည်ပတ်​နေ​လို့​သူ​တို့​က​ကိုယ်တိုင်​လည်း နေ့​မ​နား​ည​မ​နား​စက်​ရုပ်​တွေ​လို အလုပ်​လုပ်​နေ​သူ​တွေ​မို့​သူ​တို့​နဲ့​အတူတူ​ကိုယ်​လည်း​လုပ်​နိုင်​ဖို့​လို​အပ်​ပါ​တယ်။မိုးလင်း​ရင် သတ်​မှတ်ထား​တဲ့​အချိန်​မှာ​ထ​ပြီး​အလုပ်​လုပ်​ရ​တာ​မျိုးရှိ​တတ်​သ​လို ည​ဆိုင်း ဆင်း​ရ​တာ​မျိုး​တွေ​လည်း​ရှိ​တတ်​ပါ​တယ်။မြန်မာ​ပြည်​မှာ ဘယ်​အေး​ဂျင့်​ကောင်း​လဲဆို​တာ​ထက်​တကယ်​စက်​ရုံ​ကို အလုပ်​လာ​လုပ်​နေ​တဲ့​သူ​တွေ​ကို​ဘယ်​အေး​ဂျင့်​က​လာ​လဲဆို​တာ​ကို​သေချာ​ဆက်​သွယ်​မေးမြန်း​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။မ​ရှိ ရှိ​တာ​နဲ့​လာ​ဖို့​ကြိုးစား​ရင်း​အလိမ်ခံ​ရ​တာ​တွေ​လည်း​ကြား​ဖူး​တော့​သေချာ​တဲ့​နေရာ​က​နေ ဆက်​သွယ်​ပြီး​မှ​ကြိုးစား​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။နောက်​တစ်​ခု​က ရ​လာ​မဲ့​ဝင်ငွေ ထွက်​ငွေ​ကို တွက်ချက်​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။ရ​လာ​မဲ့​ယမ်း​ဆယ့်​နှစ်​သောင်း​မြန်မာ​ငွေ​ဆယ့်​နှစ်​သိန်း​က​နေ​အကြမ်း​အား​ဖြင့် အိမ်​ငှား​ခ ရေ​မီး​ဖိုး​နှစ်​သိန်း​ခွဲ​က​နေ သုံး​သိန်း​လေး​သိန်း​ထိ ကုန်​ကြ​နိုင်​ပါ​တယ်။ဖုန်း အင်​တာ​နက် တစ်​လ​လုံး​အတွက် ခန့်​မှန်းခြေ​တစ်​သိန်း​နီးပါး​ကုန်​ကြ​နိုင်​ပါ​တယ်။အင်​တာ​နက် မ​သုံး​ပဲ သာမန်​ခေါက်​ဖုန်း​ဆို​ရင်​တော့​တစ်​လ နှစ်​သောင်း​လောက်​ပါ​ပဲ။အခွန်​ဆောင်​ရ​ပါ​မယ် အလုပ်​လုပ်​နေ​သူ​တွေ​ဆို​ရင်​ကျောင်းသား​တွေ​ထက် အခွန်​စား​ရိတ်​ကြီး​ပါ​တယ်​တစ်​လ နှစ်​သိန်း​က​နေ သုံး​သိန်း​ထိ ကုန်ကျ​နိုင်​ပါ​တယ်။စား​သောက်​စား​ရိတ်​ခြွေ​တာ​ရင် တစ်​လ နှစ်​သိန်း​လောက်​ကုန်ကျ​နိုင်​ပါ​တယ်။အကြမ်း​အား​ဖြင့် ကိုယ့်​အတွက် တစ်​လ ကုန်ကျ​ငွေ​ကို​ဆယ်​သိန်း​လို့​တွက်ချက်​ထား​ပါ။ဒီ့​ထက်​လျှော့​လည်း ရှစ်​သိန်း ကိုး​သိန်း​တော့ ကုန်ကျ​ပါ​တယ်။အခြေ​ခံ​အလုပ်​သမား​အနေ​နဲ့​လာ​ဖို့​စာ​ချူပ်⁠ချူပ်​တဲ့​အခါ ကိုယ်​ဘယ်လောက်​ရ​မ​လဲဆို​တာ​နဲ့​ကိုယ်​ဘယ်လောက်​ကုန်ကျ​မယ်​ဆို​တာ​ကို တွက်ချက်​ပြီး​မှ​ဝန်​ဆောင်​ခ​ပေး​ရ​မဲ့​ငွေ​နဲ့​ကိုယ့်​ဘာသာ​သေသေချာချာ​တွက်ချက်​ပြီး​မှ လာ​ခဲ့​ပါ။ရ​တာ​နဲ့​ကုန်​မှာ မ​ကိုက်​ရင် ကိုယ့်​နိုင်ငံ​မှာ ကိုယ်လုပ်​နိုင်​တာ​လုပ်​ပြီး လာ​မဲ့​ငွေ​ကို​ရင်းနှီး​ပြီး​ရန်ကုန်​မှာ​တစ်​ခု⁠ခု​လုပ်​မှ​စား​တာ​က ပို​ကောင်း​ပါ​လိမ့်​မယ်။
ကျောင်း​နဲ့​လာ​ဖို့​စဉ်းစား​ထား​သူ​တွေ​ကျောင်း​လျှောက်​မယ်​ဆို အပေါ်​မှာ​ပြော​ခဲ့​သ​လို​စာသေ​ချာ​လုပ်​ထား​ဖို့​ရယ်၊လူ​မှူ​ဆက်ဆံ​ရေး​ကောင်း​ဖို့​ရယ်၊Homesick ဖြစ်​တာ​တွေ​သည်းခံ​နိုင်​ဖို့​ရယ်​အပြင် ကြိုးစား​လို​စိတ်လေး​ပါ ရှိ​မှ​အဆင်​ပြေ​ပါ​မယ်။ ကျောင်း​လျှောက်​ရင် တစ်​နှစ်​စာ​ကျောင်း​လခ​အနည်း​ဆုံး သိန်း​ခြောက်​ဆယ်​က​နေ သိန်း​ရှစ်​ဆယ်​ကုန်ကျ​ပါ့​မယ်။နေ​စရာ အိမ်(သို့)အဆောင်​က​လည်း သုံး​သိန်း​က​နေ လေး​ငါး​သိန်း​ထိ​ရှိ​နိုင်​ပါ​တယ်။ဂျပန်​မှာ​အိမ်ခန်း​ငှား​ခ ဈေး​ကြီး​ပါ​တယ်။ပထမ​ဆုံး​စ⁠စ​လာ​သူ​အတွက် သိန်း​ကိုး​ဆယ်(သို့)သိန်း​တစ်​ရာ​လောက်​ရင်းနှီး​ရ​ပါ​မယ်။ စာ​ရွက်​စာ​တမ်း​လုပ်​တာ​တွေ ဘာသာ​ပြန်​တာ​တွေ​လေ​ယဉ်​ခ​တွေ​က ဆယ်​သိန်း​နီးပါး ကုန်ကျ​ပါ​မယ်။ဘယ်လောက်​ပဲ​ချမ်းသာ​တဲ့​မိသား​စု​က လာ​ပါ​စေ တစ်​နှစ်​ကို သိန်း​တစ်​ရာ​နီးပါး​ကျောင်း​လခ​ရယ်၊စား​ဝတ်နေ​ရေးစား​ရိတ်​ရယ်​ကို အိမ်​က လက်​ဖြန့်​မ​တောင်း​ဘူး​ဆို​တဲ့ စိတ်​ကလေး​ရှိ​မှ​လာ​ခဲ့​ပါ။ မနက်​ဆို​ကျောင်း​တတ် နေ့​လည်​က​နေ​ည​အထိ အလုပ်​လုပ်​ရ​ပါ​မယ်၊အချိန်​တန် တစ်​နှစ်​ပြည့်​ရင် ကျောင်း​လခ နောက်​တစ်​နှစ်​စာ ထပ်မံ​သွင်း​ရ​ပါ​မယ်။ဒီ​နေရာ​မှာ​လည်း​နှစ်​မျိုး​ကွဲ​သွား​နိုင်​ပါ​တယ်။ထူးချွန်​သူ ကျောင်း​တတ်​မှန်​သူ​စာ​ကြိုးစား​သူ​တွေ​အတွက် ပညာသင်​ဆု​ရ​ခဲ့​ရင်​ကျောင်း​လခ တစ်​နှစ်​စာ​ကို ဒုတိယ​နှစ်​က​နေ​စ​ပြီး​ပေး​စရာ​မ​လို​တာ​မျိုး​လည်း​ရှိ​ပါ​တယ်။လာ​တဲ့​အခါ​ကုန်ကျ​စား​ရိတ်​ကို ကာ​မိ​အောင်​အချိန်​ပိုင်း​အလုပ်​လုပ်​ဖို့​က စကား​ကောင်း⁠ကောင်း​ပြော​တတ်​သူ​နဲ့​စကား​ကောင်း⁠ကောင်း​မ​ပြော​တတ်​သူ​နှစ်​မျိုး​ကွဲ​ပြီး​အလုပ်​ရှာ​ရ​တာ​ရော အလုပ်​လုပ်​ရ​တာ​ပါ အခွင့်အရေး​ခြင်း​မ​တူ​သ​လို​ကျောင်း​မှာ စာ​လိုက်​လုပ်​ရ​တဲ့​အခါ စာ​ရ​ပြီး​လာ​တဲ့​သူ​နဲ့ စာမ​ရ​ပဲ​လာ​တဲ့​လူ​ရဲ့​ကြိုးစား​အားထုတ်​ရ​မှူ​က​လည်း​အရမ်း​ကို​ကွာ​ခြား​ပါ​တယ်​စာ​ရ​ပြီး​သား​လူ​က အလုပ်​မှာ​လည်း​အဆင်​ပြေ​နိုင်​သ​လို​ကျောင်း​စာ​လည်း​အခက်​အခဲ​မ​ရှိ​နိုင်​ပါ​ဘူး။ကျောင်း​ပြီး​ချိန်​အလုပ်​ဝင်​ရင်​လည်း ကိုယ့်ကို​ကိုယ် ယုံကြည်​ချက်​အပြည့်​နဲ့​အလုပ်​ရှာ​နိုင်​ပါ​တယ်​သူ့​ထက်​ငါ​ထူးချွန်​သူ​တွေ​ထဲ​က ထူးချွန်​သူ​တစ်​ယောက်​ဖြစ်​ဖို့​ကိုယ့်​နည်း​ကိုယ့်​ဟန်​နဲ့ ကျောင်း​က​သင်​သ​မျှ​ရော အပြင်​လောက က​ပါ လေ့​လာ​သင်​ယူ​သင့်​သ​လို အချိန်​ပိုင်း​အလုပ်​မှာ​သင်ပေး​သ​မျှ​လည်း တတ်​အောင်​သင်​ယူ​သင့်​ပါ​တယ်။ဥပမာ-စား​သောက်​ဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​ကို​လူ​အနည်း​စု​နဲ့​ဘယ်​လို​လည်ပတ်​နေ​တယ်​ဆိုင်​က​ပစ္စည်း​တွေ​အလေ​အလွှင့်​မ​ရှိ​အောင် ဘယ်​လို​ထိန်းသိမ်း​တယ်​ဆို​တာ​မျိုး၊ဆိုင်​မ​ဖွင့်​ခင်​ဘာ​တွေ​ဘယ်​လို​အဆင်သင့်​ပြင်ဆင်​ထား​တာ​မျိုး၊အလုပ်​သမား​ကို အလ​ဟာ​သ လ​စာ​ခြေ​ပေး​နေ​ရ​တာ​မျိုး​မ​ဖြစ်​အောင် အားလပ်​ချိန်​မှာ​တောင်​ပြင်ဆင်​စရာ​တွေ​ပြင်ဆင်​ခိုင်း​ရင်း​ဘယ်​လို​အသုံး​ချ​တယ်​ဆို​တာ​က အသး​အမွှား​က​အစ မှတ်သား​သင်​ယူ​မယ်​ဆို တစ်​ချိန်⁠ချိန်​ကိုယ်​ပိုင်ဆိုင်​ဖွင့်​ခဲ့​သည်​ရှိသော်​အကျိုး​ရှိ​မှာ​ပါ။Convenience store ဆို​လည်း​လူ​နှစ်​ယောက်​တည်း​နဲ့​တစ်​ဆိုင်​လုံး​လည်ပတ်​နေ​အောင် နှစ်​ဆယ့်​လေး​နာရီ ဝန်​ဆောင်​မှူ​လစ်ဟင်း​မှူ​မ​ရှိ​အောင်သူ​တို့​ရဲ့​အုပ်​ချူပ်​ပုံ အဆင့်ဆင့်​က​စ​လို့Security ထိ နောက်ဆုံး ကိုယ့်​လက်​နဲ့​ကိုင်​ပြီး​ပစ္စည်း​မှာ​တဲ့​စက်​ရဲ့data system ကို ဘယ်​လို​လည်ပတ်​နေ​တယ် က အစ​ငွေ​ရှင်း​စက်​ရဲ့​လည်ပတ်​မှူ​အထိ ကို လေ့​လာ​နို
Next post ရွှေတိဂုံ စေ​တီတော် အောက်​က လျို့​ဝှက် ချက် ၂ ခု ကို သိ​ခဲ့​သော အာ​မေး​နီး​ယန်း လူ​မျိုး
Previous post အဖေါ်​မဲ့ အထီးကျန် ( ၂ )